Manitrikitrika ireo zanaka Antandroy : «Tena tany Anjozorobe ny zanaky ny filoha» | NewsMada
Nitondra valin-kafatra, tamin’izay nambaran’ny jeneraly Rakotomahanina Florens, sy ny fanamarihana nataon’ny filoha Rajaonarimampianina, mikasika ny « raharaha Anjozorobe », tetsy Andrefan’Ambohijanahary, indray, omaly ny solontenan’ireo zanaka Antandroy. Ireto farany izay nanitrikitrika fa « tena tany Anjorozobe ny zanaky ny filoha ».
« Anananay daholo ny porofo fa miandry ny tohiny izahay ary tsy mbola hiteny. Betsaka ny fanodinkodinan-dresaka… Tsy hanaiky hatramin’ny farany izahay na inon-kidona na inon-kihatra amin’ny tsy fahitana ny fatin’ny zanakay… Ity izao ny sarin’ny zanakay maty », hoy Tsimiondra Tomasy, tetsy Andrefan’Ambohijanahary, omaly tamin’ny mpanao gazety, manoloana ny « Raharaha Anjozorobe ». Notondroiny ho anisan’ny nitifitra tamin’izany ny sergent iray notononiny anarana.
Ny lalana nizoran’ny zanaky ny filoha
Nanamafy kosa ny avy amin’ny fianakaviana, tamin’ny alalan’i Malioda fa tena tany an-toerana ny zanaky ny filoham-pirenena. Notanisainy amin’ny antsipiriany avokoa ny fotoana niaingany teto, nandalo tao Ankadilalana. Ny mariky ny fiara 4×4 fotsy nitondra azy, nijanona 15 km miala ny toeram-pitrandrahana vao marainabe… « Efa niala ny zandary sy ny vadin-tany ka iza no nitifitra sy nanome baiko ? Tena tany izy ary maro ireo afaka manaporofo izany… », hoy izy.
Nitondra valin-kafatra ho an’ny lehiben’ny CIRGN, ny Jly Rakotomahanina Florens kosa i Jean Yrmand ka nilaza fa tsy marina ny nambaran’ity manamboninahitra ambony ity. « Tsy tokony handainga izy… Tsy fantany akory io toeram-pitrandrahana io. Tsy misy tanàna raha tsy any amin’ny 50 na 70 km ary mandeha ora fito any ho any vao tonga any ka tsy ho henon’ny fokonolona izany poa-basy izany », hoy izy.
Andrasana ny ho tohin’ny raharaha
Tsiahivina fa efa nampanao fanadihadiana amin’ny hananganana vaomiera manokana hisahana ity « Raharaha Anjozorobe » ity ny filoha Rajaonarimampianina, araka ny nambarany ny herinandro teo, teny Iavoloha. Nanamafy ny tenany fa tsy tany an-toerana araka ny voalazan’ireto zanaka Antandroy ireto ny zanany.
Ankoatra izany, mbola mijanona ho fikaroham-baovao (renseignement) fa tsy fanadihadiana lalina sy famotorana no nataon’ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, araka ny nambaran’ny Jly Rakotomahanina ny herinandro teo koa. Mbola miandry ny fitoriana momba izany rahateo izy ireo.
Etsy andaniny, efa naneho hevitra sy fanelanelanana avokoa ireo olobe sy parlemantera zanaky ny any atsimo. Efa nijapy ity « Raharaha » ity koa ireo mpanao politika efa fantatra amin’ny nataony teto amin’ny firenena. Zara aza misy… Hikoha-maina aza moa atao ?
Andrasana ny ho tohin’ity « Raharaha Anjozorobe », mahabe resaka ity.